5 Ny ankamaroan'ny ivon-tanàna antitra manintona any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Ny ankamaroan'ny ivon-tanàna antitra manintona any Eropa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 23/01/2021)
Ny ivon-tanàna antitra manintona any Eropa dia ohatra mahatalanjona amin'ny herin'ny tantaran'ny Eropa. Trano kely tsy fahita, katedraly manaitra eo afovoan-tanàna, lapa voatahiry tsara, sy ny kianja afovoany, manampy amin'ny majika tanàna eropeana. ny 5 ny ankamaroan'ny ivon-tanàna antitra manintona any Eropa dia nijanona nandritra ny taonjato maro.
Ny loko, maritrano, ary ny angano dia mitoetra sy mijoro isaky ny tanàna. Avy any Prague ka hatrany Colmar, Ny ivon-tanàna taloha any Eropa dia mendrika ny fitsidihana anao tanteraka, ary farafahakeliny faran'ny herinandro lava iray.
1. Prague Old City Center, Repoblika Tcheky
Ny afovoan-tanàna taloha mahafinaritra any Prague dia tena tsara tarehy. Somary lehibe ny kianja afovoan-tanàna, miaraka amin'ny bistros mahafinaritra, trano fisotroana kafe, sy fivarotana sakafo. Ny kianja no toerana mety indrindra hijeren'ny olona, nanandrana Labiera tseky, ary saosisy namboarina rehefa miandry ny fampisehoana famantaranandro. Ny zava-nisongadina tao afovoan-tanàna taloha dia, mazava ho azy, ny tilikambo astronomia. Ka aza gaga rehefa mahita mpizahatany marobe mivory eo an-kianja isaky ny ora adaladala.
Ny mampiavaka ny afovoan-tanàna taloha mahafinaritra any Prague dia tranobe maro loko mahafinaritra. Fomba Baroque fiangonana St.. Nicholas ary ny fiangonana gothic an'ny Lady Lady tamin'ny taonjato faha-14 talohan'i Tyn, tsy tokony ho hita. Ny afovoan-tanàna taloha ao Prague koa dia misy ny Tsena noely no atao, ary ny afovoan-tanàna mahafinaritra dia mivadika ho angano mahatalanjona.
Ny afovoan-tanàna taloha mahafinaritra ao Salzburg dia tsara tarehy sy miavaka. Fangaro amin'ny maritrano italianina sy alemanina, Moyen-style hatramin'ny taonjato faha-19, mamorona iray amin'ireo ivon-tanàna manintona indrindra any Eropa. Salzburg, fantatra amin'ny anarana hoe Altstadt dia a Izao tontolo izao UNESCO lova tranokala ary fitsangatsanganana an-tany mahafinaritra avy any Wina, azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby.
Ny fon'ny afovoan-tanàna taloha ao Salzburg no tranon'ny andriana taloha, ny Residenz State an'ny 180 efi-trano. Ny kianjan'i Residenz no ahafahanao mankafy ny tsena krismasy mahafinaritra an'i Zalsburg, kaonseritra mozika mivantana. koa, aza hadino ny mandehandeha manodidina ny afovoan-tanàna taloha, mankany amin'ny Residenz loharano, Trano fahazazan'i Mozart, ary Katedraly Salzburg.
Ny tanànan'i Salzburg dia any avaratry ny Alpes, miaraka amin'ny tady, sy domes ao aoriana. Misy renirano miampita ny iray amin'ireo tanàna tranainy be mpiambina indrindra ao Eropa manampy ny fijerin'ny paositra.
3. Bruges Old City Center, Belzika
Brugge, na araka ny fantatsika rehetra hoe Bruges, dia tanàna mahafinaritra iray hafa misy afovoan-tanàna taloha mahafinaritra. Raha vao ny tranon'ny Vikings, anio izany iray amin'ireo vatosoa miafina any Eropa. efa nampiasaina’ lalan-kely tery ary rarivato eny an-dalambe, trano miloko, ary ny lakandrano manao azy ho vakoka UNESCO.
Rehefa mandeha manodidina ny afovoan-tanàna taloha any Bruges ianao, ho hitanao ny fivarotana kely manolotra dantelina tsara tarehy. efa nampiasaina’ dantelina dia malaza manerantany, koa ankoatry ny fitondrana sary mahafinaritra, dantelina dia ho fahatsiarovana mahafinaritra azonao entina avy any Bruges.
Bruges dia azo aleha amin'ny fitateram-bahoaka avy any Bruxelles, ary azonao atao ny mijery ny tanàna amin'ny kalesy, an-tongotra, na mitaingina lakana. Ny Markt dia toerana tsara hanombohana ny dianao mandritra ny taona, ary manohy any amin'ny Belfry mahavariana any Bruges, ary Fiangonan'i Lady Bruges. Raha te-hidera ny afovoan-tanàna taloha mahafinaritra avy any ambony ianao, avy eo manolotra fahitana miavaka ny tilikambo Belfry.
4. Colmar, Frantsa
Ny afovoan-tanàna taloha mahafinaritra an'i Colmar dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra azo tsidihina ao Alsace. Ny afovoan-tanàna taloha dia iray amin'ireo ivon-tanàna antitra be fitehirizana any Eropa. Ireo trano’ Ny tarehy dia nitahiry ny hatsarany sy ny hatsarany toy ny paositra taorian'ny vanim-potoana medieval, ary ianao dia afaka mahita ireo singa Renaissance tany am-boalohany tao amin'ny maritrano mirehitra.
Voahodidina tanimboaloboka i Colmar, ary mampiavaka azy hatrany amin'ireo ivon-tanàna taloha, ho hitanao ny fiangonana tsara Saint-Martin. Zavatra iray hafa tsy tokony hihoatra ny Little Venice any Colmar, izay ahitanao trano fisakafoanana kely hafahafa, tetezana, sy lakandrano hitrandrahana.
Betsaka ny safidy fampiantranoana ao amin'ny tanàna kely Colmar, fa afaka mankafy ny afovoan-tanàna taloha ao Colmar koa ianao, on a day-trip from Strasburg. The wonderful vineyards are the perfect excuse for a French vaky tanàna ary fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro.
Vidiny Paris mankany Colmar Train
Zurich mankany Colmar Train vidiny
Stuttgart mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Colmar
5. Ivon-tanàna taloha any Florence, Italia
Duomo of Florence, miaraka amin'ny tilikambony sy Katedraly, mitondra ny afovoan-tanàna taloha ao Florence amin'ny alàla, fahalehibeazan'i, sy hatsaran-tarehy. Ny afovoan-tanàna taloha ao Florence dia iray amin'ireo 5 tsara tarehy mahafatifaty sy manaitra indrindra any Eropa. Ny teboka fanombohanao an'ity tranonkala lova manerantany UNESCO ity dia manomboka Piazza del Duomo mankany Piazza Della Signoria.
Raha maniry hahita bebe kokoa an'i Florence ianao, dia tokony hanohy ny Uffizi Gallery sy ny Boboli Gardens ianao. Tsy misy fomba tsara kokoa hianarana momba ny tantara sy ny kolontsain'ny tanàna nandritra ny taonjato maro noho ny tamin'ny zavakanto. Florence dia tanàna italiana mahafinaritra, izay ahafahanao maka panini, eo ivelan'ny Duomo. Raha manam-potoana ianao, avy eo miakatra any an-tampon'ny Duomo, for mahatalanjona ny fomba fijeriny anisan'ny tanàna tsara tarehy indrindra eto Italia.
Ny afovoan-tanàna taloha ao Florence dia a fitsangatsanganana an-tongotra avy any Venise. Na izany aza, tokony hanokana farafaharatsiny ianao 2 andro feno hijerena ireo tranonkala sy vatosoa an'i Florence.
Raha te-hivezivezy ara-potoana ianao amin'ny vanim-potoana medieval sy Renaissance, avy eo ireto 5 ny ivon-tanàna taloha any Eropa no làlana tsara indrindra. eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao handamina ny dianao mankany amin'ireo ivon-tanàna antitra manintona indrindra amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe “Ivotoeran'ny tanàna antitra be mpitia 5 any Eoropa” ao amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)